संसदमा राष्ट्रिय सहमति सरकारको चर्चा Canada Nepal
May 17 2021 | २०७८, जेठ ३गते
२०७८, जेठ ३गते
ओलीले गरे माधवकुमारलाई राष्ट्रपतिको अफर
कोभाक्समा खोप उपलब्ध गराउन युनिसेफको सात औद्योगिक राष्ट्रसंग आग्रह
गुल्मीमा निषेधाज्ञा थपियो
कर्णाली प्रदेश : नवनियुक्त मन्त्री शर्मा र नेपालीले लिए सपथ
यस वर्षको 'मिस युनिभर्स' जितिन् मेक्सिकोकी २६ वर्षीया मेजाले
भारतले सार्वजनिक गर्‍यो आफैंले बनाएको कोरोनाविरुद्धको औषधि, नेपाललाई कस्तो फाइदा ?
मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै
कोरोनाका बिरामीलाई अक्सिजन किन्न पुष्प खड्काले गरे आर्थिक सहयोग
संसदमा राष्ट्रिय सहमति सरकारको चर्चा
चैत्र ३० २०७७
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनु पर्नेमा जोड दिएको छ । सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कांग्रेस सांसद प्रदीप गिरीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन छलफल थालेका बेला सांसद गिरीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पुनः संसद विघटन नगर्न आग्रह गरे ।
विद्यमान राजनीतिक संकटको दोष प्रधानमन्त्री ओलीमाथि लगाएका उनले संसदमा भनाभन गरेर समस्याको समाधान ननिस्कने भएकाले राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने बताएका हुन् ।
संविधानको रक्षा गर्दै सबैको भावना समेट्नु पर्ने भन्दै संसदमा उनले भने, ‘संविधानको रक्षा गर्छौं कि गर्दैनौं ? रक्षा गर्दा यही रुपमा गर्छौं वा यथोचित परिर्माजनका साथ गर्छौं ? त्यो परिमार्जन टालटुले हुन्छ वा मुलुकको सबै समुदाय, जातिको चित्त बुझाउने गर्छौं ? यो संविधानलाई बचाएर अगाडि बढ्ने हो वा २०४७ सालको जस्तै विजोग गर्ने हो ? अथवा चुच्चे नक्साको जस्तो विजोगमा लैजाने हो ?’
चैत्र ३०, २०७७ सोमवार १५:५५:०५ बजे : प्रकाशित
प्रधानमन्त्री ओलीले यसरी सम्झिए मदन-आश्रितलाई
काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनताको जीवनसँग जोडन र जनतालाई समृद्ध जीवनको प्रत्याभूति गर्न सके मात्र लोकतन्त्र सार्थक हुने बताउनुभएको छ । जननेता मदनकुमार भण्डारी र नेता जीवराज आश्रितको २८ औँ स्मृति दिवसका अवसरमा आज विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यक्ष ओलीले भण्डारीले प्रतिपादन गरेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’को निरन्तरता रक्षा, कार्यान्वयन र विकास गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
उहाँले राष्ट्रियताको सम्वद्र्धन र राष्ट्रिय हिताको रक्षाका लागि अविचलितरुपमा क्रियाशील हुने प्रण गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध, जनआधारित, गतिशील, अनुशासित र मुलुकको नेतृत्वदायी शक्तिका रुपमा स्थापित गर्ने पनि जनाउनुभएको छ ।
कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्दै आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण तथा समाजवादको मुख्य संवाहक बनाउने आफूहरुको इमान्दार प्रयास भए पनि कतिपय नेताका विभाजनकारी, अस्थिर र अवसरवादी सोच तथा क्रियाकलापका कारण नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँगको एकीकरणको अभियान निष्कर्षमा पुग्ने नसकेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले एमालेले उक्त एकीकरणको विरासतलाई अगाडि बढाउँदै नयाँ स्वरुपमा पुनःस्थापित गरी आन्दालनलनई एकीकृत गर्ने अभियानमा निरन्तर लागिरहने संकल्प गर्नुभएको छ ।
दिवसका अवसरमा भण्डारी र आश्रितप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै एमालेका महासचिव एवं उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले भूमिगत राजनीतिदेखि खुल्ला राजनीतिसम्म आइपुग्दा जननेता भण्डारीले नेपालको वाम र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा शिखर स्थान बनाउन सफल नेतृत्व गर्नुभएको स्मरण गर्नुभएको छ ।
उहाँले भण्डारीको नेतृत्वमा तत्कालिन समयमा पार्टीले चलाएको अभियानले नेकपा (एमाले) एउटा नयाँ र उदीयमान शक्तिका रुपमा स्थापित भएको र त्यही जगमा पार्टी आज जनतामा लोकप्रिय भएको उल्लेख गर्दै भण्डारीले नै वहुदलीय जनवादको व्याख्या, पार्टी, समाज र राज्यको लोकतान्त्रिकरणको मान्यतालाई अघि सारेर माक्र्सवादलाई नेपालको विशिष्टतामा विकास गर्नुपर्ने मान्यतालाई अघि सार्नुभएको जनाउनुभएको छ ।
स्मृति दिवसका अवसरमा आज एमालेको पुरानो केन्द्रीय कार्यालय रहेको स्थान मदननगर बल्खुमा भण्डारी र आश्रितप्रति श्रद्धाञ्जलित दिने कार्यक्रम छ । कोरोना महामारीका कारण खुल्ला कार्यक्रम आयोजना गरिएको छैन । भण्डारी र आश्रितको २०५० जेठ ३ गते चितवनको दासढुङ्गामा भएको जीप दुर्घटनामा निधन भएको थियो ।रासस
जेठ ३, २०७८ सोमवार १०:५४:१४ बजे : प्रकाशित
# मदन भण्डारी
मदन भण्डारीको हत्यारा खोज्न किन चाँसो देखाएनन् राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले ?
काठमाडौं । आज जेष्ठ ३ गते मदन-आश्रित स्मृति दिवस मनाइदैछ । विसं २०५० जेठ ३ गते सडक दुर्घटनामा तत्कालीन एमाले महासचिव मदन भण्डारी र संगठन प्रमुख जीवराज आश्रितको निधन भएको थियो ।
हरेक वर्ष जेष्ठ ३ गते सामाजिक संजालमा तेर्सिने एउटा गम्भीर प्रश्न हो, "राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री एउटै पार्टीको तर किन मदन भण्डारीको हत्याराको खोजीमा चाँसो देखाउदैनन् ?"
मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितद्धढेको जीप चितवनको दासढुङ्गा भन्‍ने स्थानबाट त्रिशूली नदीमा खसेर दुर्घटनामा परेको थियो । उक्त दुर्घटनामा परेका जीप चालक अमर लामा भने जीवित थिए । तर पछि उनको पनि हत्या भएपछि घटना थप रहस्यमय बनेको थियो ।
मदन भण्डारीको मृत्यु दुर्घटनाबाट भएको भनिए पनि जनतादेखि एमाले कै नेताहरुले अझै सम्म विश्वास गर्न सकेका छैनन् । विश्वासिलो आधार नभएको साथै चालकको समेत हत्या भएको कारण मदन भण्डारीको मृत्युलाई रहस्यमय नै मानिएको छ । एमालेको सरकार शक्तिशाली सरकार छ तर पनि मदन भण्डारीको विषयमा कुनै चाँसो नदेखाएकोले गर्दा प्रश्न माथी प्रश्न तेर्सिन थालेको छ ।
मदन भण्डारीको हत्याको छानवीन गर्न आयोग बनेको थियो जसको अध्यक्ष थिए अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । त्यस बेला प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रुपमै भनेका थिए, "म सरकारमा गए भने मदन भण्डारीको हत्यारा पत्ता लगाउँछु ।" मदन भण्डारीका राजनीतिक सहकर्मी रहेका केपी शर्मा ओलीले दिएको उक्त अभिव्यक्तिले एमाले कार्यकर्ता माथि थप उर्जा थपिएको थियो तर प्रधानमन्त्री ओली सरकारमा रहेको ३ वर्ष बितीसक्यो तर मदन भण्डारीको हत्यारा पत्ता लाउन कुनै चाँसो नदेखाएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिन मदन भण्डारी कै जीवनसंगीनी र राजनीतिक सहयात्री विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति छिन् तर पनि यस विषयमा खासै चाँसो नदेखाएको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले यस विषयमा आफ्नो ठाउँबाट चाँसो देखाएको हुनसक्छ तर व्यवहारमा कुनै त्यस्तो विश्वासिलो तरिकाको चाँसो देखाएको नपाएपछि जनतामा प्रश्न माथी प्रश्न उब्जिन थालेको छ ।
केपी शर्मा ओली र विद्यादेवी भण्डारी मात्र होईन अरु ३ एमालेका नेताहरुले समेत चाँसो नदेखाएका हुन् । स्व. मनमोहन अधिकारी, माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समेत प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् तर यी ३ प्रधानमन्त्री हुँदा यस विषयमा कुनै किसिमको चाँसो नदेखाएको पाईएको छ ।
आखिर किन एमाले पार्टीले मदन भण्डारीको हत्यारा खोज्न चाँसो नदेखाएको ? प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति नै आफ्नो पार्टीको नेता हुँदा समेत किन पार्टीबाट दबाब नआएको ? मदन भण्डारी कै 'जबज' बोकेर हिंडेको एमाले पार्टीले आखिर किन मदन भण्डारीको हत्यालाई रहस्यमय नै बनाएर राख्न चाहेको छ ?
जेठ ३, २०७८ सोमवार ११:५१:०८ बजे : प्रकाशित
# विद्यादेवी भण्डारी
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीप्रति बाबुरामको कटाक्ष– मदन भण्डारीको नाममा स्वार्थको रोटी सेक्न छोडौं
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मदन–आश्रित निधन घटनाको छानबिन गर्न चुनौती दिएका छन् ।
नेकपा एमालेले सोमबार आफ्नो पार्टीका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको स्मृति दिवस मनाइरहेका बेला डा. भट्टराईले सो चुनौती दिएका हुन् । २०५० जेठ ३ गते चितवनको दासढुंगामा रहस्यमय जिप दुर्घटनामा परेर मदन र आश्रितको निधन भएको थियो । तर, आजपर्यन्त जनताले विश्वास गर्ने गरी सो घटनाको छानबिन भएको छैन ।
मदन–आश्रित स्मृति दिवसको अवसरमा उनीहरुप्रति श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गरेका डा. भट्टराईले विद्यादेवी राष्ट्रपति र मदनको उत्तराधिकारी दावी गर्ने ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला उच्चस्तरीय निष्पक्ष छानबिन गर्न चुनौती दिँदै अन्यथा मदन–आश्रितको नाममा स्वार्थको रोटी सेक्न छोड्न भनेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा डा. भट्टराईले लेखेका छन्, ‘२०५० जेठ ३ गते दासढुंगामा रहस्यमय मृत्युवरण गर्नुभएका नेताहरू मदन–आश्रितप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन । मदनपत्नी राष्ट्रपति र मदनको उत्तराधिकारी दावी गर्ने प्रम भएको बेला उच्चस्तरीय निष्पक्ष छानवीन गरेर त्यो रहस्यको अन्तिम निर्क्योल गरौं। नत्र वहाँहरूको नाउँमा स्वार्थको रोटी सेक्न छोडौं ।’
जेठ ३, २०७८ सोमवार १३:१३:१० बजे : प्रकाशित
काठमाडौं - सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने भएको छ । बैठक सोमबार साँझ ५ बजे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्नेछ ।
मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक हरेक सोमबार र बिहीबार बस्ने गर्दछ । आज बस्ने बैठकमा कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका थप उपायहरु बारे छलफल हुने बताइएको छ।
यसअघि आइतबार सिंहदरबारमा कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) को बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि राज्यको सबै शक्तिलाई प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
जेठ ३, २०७८ सोमवार १३:३३:३१ बजे : प्रकाशित
# मन्त्रिपरिषद् बैठक
काठमाडौं - कर्णाली प्रदेशमा आइतबार नियुक्त भएका २ मन्त्रीले आज शपथ ग्रहण गरेका छन् ।
आइतबार प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको नेतृत्वमा छ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए ।
आन्तरिक मामिला, कानून, युवा तथा खेलकुदमन्त्रीमा नियुक्त भएकी सीताकुमारी नेपाली र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा नियुक्त भएका गोपाल शर्माले आज सपथ लिएका हुन् ।
उनीहरुले प्रदेश प्रमुख कलौनीबाट शपथ लिएका हुन् । नवनियुक्त २ मन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य हुन् ।
जेठ ३, २०७८ सोमवार १४:२९:५८ बजे : प्रकाशित
# कर्णाली प्रदेश
काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा एमालेको आन्तरिक विवाद साम्य हुने दिशामा अघि बढेको छ । डेढ वर्षदेखि चलेको पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीचको टकराव गत हप्तादेखि अन्त्यको दिशामा अघि बढेको छ ।
सार्वजनिक मञ्चबाट एक अर्काविरुद्ध विषवमन गरेका उनीहरुबीच ओली सरकारलाई निरन्तरता दिने गरी सहमति बन्यो । यो बाहिर देखिएको कुरा हो, तर भित्र प्रधानमन्त्री ओलीले माधव नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ ।
अध्यक्ष ओली र नेता नेपालबीचको टकराव बढिरहँदा न त एमालेको सरकार रहने भयो, न त नेपाल समूहका नेताहरुको राजनीतिक भविष्य नै सुरक्षित रहने भयो, यी दुई दृश्य सतहमा आएपछि दुवै सहमतिमा पुग्न बाध्य भए । तर, नेता नेपाल ओली सरकार जोगाउन राजी कुन शर्तमा भए ? आम चासो छँदै छ ।
यो चासोलाई मेटाउने गरी अहिले राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ– माधवकुमार नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउन ओली सहमत भए । सोही सहमतिअनुसार नेता नेपाल पनि ओली सरकार जोगाउन राजी भए ।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको लेनदेनमा अध्यक्ष ओली र नेता नेपालबीच सहमति बन्यो । र अहिले पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि भन्दै ओली र नेता नेपालले १० सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका छन् । तर, यसअघि नै ओली र नेपालबीच नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने सहमति भएको छ ।
अब हुने १०औँ महाधिवेशनमा नेता नेपालले अध्यक्षमा दावेदारी नदिने शर्तमा उनलाई राष्ट्रपति बनाउने सहमति भएको हो । महासचिवको हैसियतमा डेढ दशक एमालेको नेतृत्व लिएका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पार्टी नेतृत्वमा दाबी नगर्ने र उनलाई राष्ट्रपति बनाउन अध्यक्ष ओली पनि सहमत भएका हुन् ।
यसअघि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नाम पनि राष्ट्रपतिका लागि चर्चामा आएको थियो । तर, अब नेता नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने गरी पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद समाधानको उपाय खोजिएको हो ।
डेढ दशकदेखिको दुई शीर्षनेताहरुबीच टकराव गत हप्तादेखि मथ्थर हुन थालेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट विश्वासको मत पाएनन् । सोही दिन गत सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६(२)अनुसार सरकार बनाउन दलहरुलाई दावी पेश गर्न बिहीबार राति ९ बजेसम्मको समय दिएकी थिइन् ।
कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई सरकार बनाउने सहज गरिदिन नेता नेपाल समूहका सांसदहरुले राजीनामा दिने तयारी गरेपछि अध्यक्ष ओली सम्झौता गर्न राजी भएका हुन् । आफ्नो सत्ता रक्षाका लागि अध्यक्ष ओली बिहीबार नै नेता नेपालसँग विवाद समाधान गर्न राजी भए । नेपाल समूहका सांसदहरुले राजीनामा नदिने भएपछि कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले बहुमतको सरकार बनाउन सकेन । त्यसपछि राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६(३)अनसार ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिन् ।
यसरी ओली सरकार जोगाएकोमा प्रधानमन्त्रीले माधवकुमारलाई राष्ट्रपतिको अफर गरेका छन् र उनी पनि राजी भएको भन्दै अहिले राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चलिरहेको छ ।
जेठ ३, २०७८ सोमवार १४:५६:०० बजे : प्रकाशित
सुदिप कुमार पौडेल